Ese mafafitera eLinux Mint 17.3 paLinux AIO | Linux Vakapindwa muropa
Zvese zvinonaka zveLinux Mint 17.3 paLinux AIO
Linux Mint 17.3 yave kuwanikwa paLinux AIO, zvichireva kuti iwe unogona kurodha pasi imwechete ISO mufananidzo pamwe nezvose zvinonhuwira zveLinux Mint mukati mayo.
Tine kugoverwa kutsva kunowanikwa mukati iyo rondedzero yeLinux AIO kugoverwa(zvese mune imwe), ino nguva iri nezve yakakurumbira Linux Mint 17.3 kugovera.
Iyo Linux AIO chirongwa hachisi chekushandisa chinhambwe kubva pachiri, nekuti izvo chete zvavanoita ndizvo boka zvese zvinonaka kana shanduro dzesisitimu mune imwechete yekumisikidza, iyo inogadzira yakanyanya kurerukirwa kune vashandisi vanoda kuyedza kwese kugoverwa kweiyo inoshanda sisitimu asi vasingade kuve nevazhinji vakaparadzanisa maiseti.
Sezvo iwe uchiziva, Linux Mint 17.3 ine yakawanda yakawanda dzakasiyana flavour sezvingaite Cinnamon, Mate, Xfce uye KDE, umo matinogona kuve nehumwe mushandisi ruzivo mune yega yega kubvira, semuenzaniso, Xfce ndeye yakaderera-zviwanikwa zvikwata uye KDE Plasma ndiyo inonyanya kutaridzika desktop.
Linux Mint ndeye inoshanda sisitimu inoenderana neiyo iconic Ubuntu, asi nemusiyano kuti iri yakanyanya ushamwari inoshanda sisitimu mumaziso emushandisi. Neichi chikonzero, Linux Mint yave yakafanira yekushandisa sisitimu yekutanga muLinux nyika uye imwe yeanofarira masystem evashandisi.
Nezvikonzero izvi, zvinotonhorera kuti Linux AIO inowanikwa yeLinux Mint, kubvira paunenge uri wekutanga zvinodhura zvakanyanya kuti uzive ne desktop ipi yauri kuisa iyo yekushandisa system uye zvinodikanwa kuyedza ese madhesiki kuti uone iyo yaunoda zvakanyanya uye ndeipi inoshanda zvakanyanya nekombuta yako.
Kana iwe uchida kuitora, ita kubva batanidzo iyi, matiri tine mavhezheni e32 Bit uye 64 Bit, ese ari maviri akapatsanurwa kuita zvikamu zviviri nekuda kwehukuru hwakakura hweiyo ISO yekuve nekuisa zvinwiwa zvese. Ndinokukurudzira kuti uzviite kuburikidza neUSB, sezvo mufananidzo wacho unotora zvinopfuura zvakajairika DVD5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvese zvinonaka zveLinux Mint 17.3 paLinux AIO
X-Apps, izvo zvitsva zvinoshandiswa kubva kuLinux Mint timu
Microsoft Office Web App pane yaunofarira distro